पोर्चुगलमा १९ बर्षीय नेपाली युवा मृत भेटिए
शनिबार , २० असार २०७७
बिहीबार असार ११, २०७७/ Thursday 06-25-20
काठमाडौं - पोर्चुगलमा एक नेपालीको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा पोखरा बुद्धचोक स्थायी घर भएका १९ बर्षीय नेपाली युवा सिद्धान्त गुरुङ रहेका छन् । पोर्चुगलको लिस्बोनबाट जुन १७ तारिखदेखि हराइरहेका उनी मृत अवस्थामा फेला परेका हुन् ।
उनी सोही दिन राति लिस्बनको ओरियन्त नजिक तेगस नदीमा फेला परेको जनाइएको छ । प्रहरीले उनलाई पानीबाट बाहिर निकाल्दा मृत्यु भइसकेको थियो । उनको मृत्यु भएको बारे परिवारलाई बुधबार जानकारी गराइएको जनाइएको छ ।
एनआरएनए पोर्चुगलका पूर्व उपाध्यक्ष कमल मान गुरुङका अनुसार अदालती प्रक्रिया पुरा गरेपछि उनको पार्थिव शरीर लिस्बोनमा नै दाहसंस्कार गरिने जनाइएको छ । उनी २ बर्षदेखि पोर्चुगलको लिस्बनमा आफ्ना बाबु आमासँग बस्दै आएका थिए ।
हङकङमा काम गर्ने क्रममा एक नेपालीको मृत्यु
इटालीमा एक नेपाली युवाको पौडी खेल्ने क्रममा ज्यान गयो
सिड्नीमा चक्कु देखाएर लुटेरालाई धपाइन् यी नेपाली युवतीले, अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा चर्चा (भिडियो)
गोकुल बाँस्कोटा भन्छन्– ओली सिधिँदा प्रचण्ड पनि सकिन्छन् (अन्तर्वार्ता)
प्रधानमन्त्री फेर्ने होइन ओली सुध्रिने बेला हो
पाकिस्तानका विदेशमन्त्री कुरेसीलाई कोरोनाभाइरस संक्रमण
झारपातबाट सुन्दर कलाकृति बनाउने कलाकारले तिरिदिए सात परिवारको घरभाडा
चीनसँगको विवादमा भारतको पक्षमा उभियो जापान
दिल्लीमा भूकम्प, मानिसको भागभाग
नेकपा विवाद : प्रचण्ड र नेपाल गल्दै, मन्त्री लेनदेनमा सहमति हुने
गौतमबुद्ध विमानस्थल डिसेम्बर भित्रै सञ्चालन हुने
अस्पतालमै पत्नीको जन्मदिन मनाए गायक प्रमोद खरेलले
फेरि नेपालमा राजतन्त्र स्थापनाको खेल, झम्सिखेलको तारे होटेलमा के के भयो ?
नेकपामा प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिरक्षा गर्ने नेताको खडेरी
यस्तो अनौठो चलन, जहाँ विहेपछि रात बिताउन हरेक रात ससुराली जानैपर्छ !
आतंककारी संगठनका कमाण्डर नेपाली, सोमालियामा मारिए
के सुवास नेम्वाङ प्रधानमन्त्री बन्दै छन् ? ओली समूहले पठायो यस्तो प्रस्ताव
साम्राज्ञीलाई भुवनले दिए कडा जवाफ - ‘जुन थालमा खाने त्यही थालमा दुलो पार्ने